नेपालमा आएको कोरोनाविरुद्धको खोपबारे यसो भन्छन् डा. रवीन्द्र पाण्डे Canada Nepal
माघ ८ २०७७
आजका २ दृश्य, निषेधाज्ञाको अनुमान र समाधान
काठमाडौं - सरकारले बिहिबारदेखि काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै घर फर्कने मानिसहरुको संख्या बढेको छ । बस काउन्टर, बसपार्क, बस स्टप आदिमा हजारौंको भीड हुन थालेको छ ।
भीडभाडमा मास्क नलगाउने पनि छन् । अझै नागरिकले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । यसैबीच डा. रवीन्द्र पाण्डेले निषेधाज्ञाको अनुमान र समाधानका बारेमा सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका छन् ।
१. बालाजु बाइसधारा मेला तथा स्वयम्भूमा हजारौं मान्छेको भीडभाड । नाकमुनी, चिउड़ोमा मास्क झुन्ड्याउनेको संख्या अधिक । मास्क लगाउने र नलगाउनेको संख्या बराबर । भौतिक दुरी कुन चरीको नाम हो ? त्यहाँ थाहा थिएन ।
२. पर्सिदेखि हुने निषेधाज्ञाको कारण उपत्याका छोड्नेको बस काउन्टर, बसपार्क, बस स्टप आदिमा हजारौंको धकेलाधकेल ।
जनस्वास्थ्यका मापदण्ड नागरिकले किन पालना गरेका छैनन् ? गृह प्रशाशनले किन पालना गराएको छैन ?
हामी नागरिक उनै हौँ, गृह प्रशाशन उही हो । निषेधाज्ञामा पनि गल्ली, भित्री बस्ती, चिया पसल, भट्टी, तरकारी बजार ...मा उस्तै भीडभाड हुने देखिन्छ ।मेडियाले रित्ता सडक र बन्द भएका मुख्य बजार देखाउनेछन् । अनि सरकारले निषेधाज्ञा पूर्ण लागु भएको भनेर मख्ख पर्नेछ । संक्रमितको संख्या बढ्नेछ । निषेधाज्ञा बढ्दै जानेछ ।
सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि काठमाडौँ उपत्यका छाड्ने बढे, बसपार्कमा यात्रुको भीड (तस्बिरसहित)
सरकारले मास्क र भौतिक दुरी कायम गराउन भएभरको शक्ति लगाउने तथा आम नागरिकले मापदण्ड पालना गर्ने हो भने संक्रमणको चेन तोडिन्छ । ३ हप्तामा अहिलेसम्मको सेटल हुन्छ । यसको लागि दुवै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्यो । यो पटकको महामारी हामीले कल्पना गरेको भन्दा धेरै संक्रामक र घातक छ । अस्पतालमा बेड छैन । अक्सिजनको अभाव छ । रोकथामको लागि कडा कदम नचाल्ने हो भने उपचार नपाएर ठूलो क्षति हुनसक्छ ।
सरकार र आम नागरिक समयमै सचेत बनौं । दुवै पक्ष सचेत बन्यौं भने लकडाउन छोंटो हुन्छ । क्षति हुँदैन ।
- मलाइ खाने बाघले तँलाई पनि खान्छ ।तँलाई खाने बाघले मलाइ पनि खान्छ ।
- महामारीमा ज्यान जोगाउनु, अनिकालमा बिउ जोगाउनु ।
बैशाख १४, २०७८ मंगलवार २०:०२:१५ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - नेपालमा पछिल्लो समय नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोनाभाइरस फैलिरहेको छ । कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले बिहिबार ५ सय बढी सक्रिय संक्रमित भएका जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरेको छ ।
अहिले नेपालमा फैलिरहेको नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना बारे धेरैलाई थाहाँ छैन । यसैबीच डा. रवीन्द्र पाण्डेले अहिले देखिएको कोरोनाभाइरस र यसबाट बच्न अपनाउनु पर्ने कुराहरु बारे जानकारी दिएका छन् ।
उनले नयाँ प्रजातिको महामारी गत बर्षको जस्तो सामान्य नभएको बताएका छन् । ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, शरीर दुख्ने, स्वाद र गन्ध हराउने, पखाला वा र बान्ता हुने, एकदम थकान हुने, निद्रा लागिरहने, छालामा बिमिरा आउने, आँखा रातो हुने भएमा तुरुन्त पिसिआर टेस्ट गराउनु पर्ने उनको भनाई छ ।
उनले भनेका छन् - यसपटकको नयाँ प्रजातिको महामारी गतसालको जस्तो सामान्य छैन । ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, शरीर दुख्ने, स्वाद र गन्ध हराउने, पखाला वा र बान्ता हुने, एकदम थकान हुने, निद्रा लागिरहने, छालामा बिमिरा आउने, आँखा रातो हुनेमध्ये केहि लक्षण मिलेमा तुरुन्त पिसिआर टेस्ट गर्नुहोला । यसपटक परिवारमा एकजना संक्रमित भएमा सबै संक्रमित हुने अवस्था छ । तसर्थ कुनै लक्षण देखिएमा आइसोलेसनमा बस्नुहोला । संक्रमणको शंका लागेमा तुरुन्त पिसिआर टेस्ट गर्नुहोला । सहेर वा हेरौं भनेर अलमल नगर्नुहोला । जति छिटो रोग पत्ता लाग्यो, त्यति छिटो उपचार पाउने अवस्था हुन्छ ।
- पिसिआर पोजिटिभ आएमा गतसाल जस्तो सप्लिमेन्ट ( भिटामिन वा इम्युन बुस्टर ) खाएर ढुक्क नहुनुहोला । यसपटक छिटो कोभिड निमोनिया हुने भएकोले तुरुन्तै नजिकको कोभिड अस्पतालको फिभर क्लिनिकमा जानुहोला । त्यहाँ चिकित्सकले तपाइंलाई परीक्षण गरेर आबश्यकता अनुसार छातीको एक्स रे, रगतको जांच तथा सिटि स्क्यान गर्ने सल्लाह दिनुहुन्छ । यदि तपाइंको अवस्था खराब छ भने उहाँहरुले औषधि वा भर्नाको लागि सल्लाह दिनुहुनेछ । उहाँहरुको सल्लाह अक्षरस पालना गर्नुहोला ।
- लामो समय ज्वरो आयो, खोकी लाग्यो, सास फेर्न गाह्रो भयो, खाना खान गाह्रो भयो वा अक्सिजनको स्तर ९४ भन्दा तल भइरह्यो भने घरमा नबस्नुहोला । यो अवस्थामा तपाईंलाई छातीमा संक्रमण भएको बुझ्न सकिन्छ । जति छिटो अस्पताल पुग्यो त्यति छिटो भर्ना हुन् नपर्ने एबम सजिलोसंग निको हुने अवस्था हुन्छ ।
- गतसाल संक्रमण भएका वा यो साल खोप लगाएका व्यक्तिलाई संक्रमण हुनसक्छ । प्रजाति फरक भएकोले गाह्रो हुन सक्छ । मैले खोप लगाएको छु वा पोहोरको एन्टिबोडीले काम गर्छ भनेर लापरबाही नगर्नुहोला । अप्ठ्यारो भए तुरुन्त अस्पताल जानुहोला ।
- बालबालिका तथा युवालाई केहि हुँदैन भनेर घरमा नबस्नुहोला । यसपटक बालबालिका र युवाको संक्रमण दर, गम्भीर हुने दर तथा मृत्युदर गतसालको भन्दा धेरै छ ।
- अस्पताल जाने बेलासम्म घोप्टो परेर सुत्नु भयो भने अक्सिजनको स्तर केहि बढ्दछ । तसर्थ पेटको बलमा घोप्टो परेर सुत्नुहोला ।
- अस्पताल प्याक छन् भनेर नआत्तिनुहोला । अस्पताल जाँदैमा सबै भर्ना हुनु पर्दैन । प्याक भएका अस्पतालले अस्पताल बाहिर समेत अक्सिजन दिएर उपचार गरिरहेका छन् |
- चिकित्सकको सल्लाह बिना आफै अक्सिजन लगाएर घरमा नबस्नुहोला । अक्सिजन उपचार हैन । निमोनिया वा अन्य छातीको संक्रमणको औषधि चलाउँदै अक्सिजन लगाउनुपर्छ । अक्सिजनको मात्रा चिकित्सकको सल्लाह अनुसार मात्र थपघट गर्नुपर्छ ।
- औषधि उपचार प्रत्येक व्यक्तिको फरक हुनसक्छ। एकजनालाई निको भएको औषधिले अर्को व्यक्तिलाई निको नहुन सक्छ । तसर्थ स्वास्थ्यकर्मी बाहेकका व्यक्तिले सिफारिस गरेको औषधि सेवन नगर्नुहोला । कुनै पनि औषधिले कोरोना च्वाट्ट निको हुने वा लाग्न नदिने कुरा गर्छ भने त्यो गलत हो ।
- प्रतिरोध क्षमता बढाउनको लागि जथाभावी आयुर्बेद औषधि नखानुहोला । सम्बन्धित चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सिफारस अनुसार मात्र आयुर्बेद औषधि सेवन गर्नुहोला । आयुर्बेद औषधिले कोभिड निको हुँदैन । तपाइंको स्टामिना बढाउँछ । यस्तो बेला सबै चिकित्सा पद्दतिको एकीकृत उपचार प्रभावकारी हुन्छ ।
- यसपटकको संक्रमणले निकै छिटो फोक्सोमा असर गर्ने किसिमको छ । ४ - ६ घण्टामा निकै बढी असर गर्न सक्छ । तसर्थ भोलि अस्पताल जाउँला भनेर नबस्नुहोला । निको भएका संक्रमितका कुरा सुन्नुहोला।
- कुनैपनि चिकित्सकले औषधि चलाएको बेला पनि भित्रभित्रै असर हुनसक्छ । यो भाइरल संक्रमण भएको हुँदा एन्टिबायोटिकको भर पर्नु हुँदैन । यस्तो अवस्थामा एकपटक छातीको एक्स रे वा सिटि स्क्यान गर्नु सुरक्षित हुन्छ।
- अस्पतालमा गम्भीर बिरामीप्रति चिकित्सकको ध्यान बढी हुन्छ । तसर्थ नआत्तिनुहोला ।
- उपचार पश्चात पिसिआर नेगेटिभ आएपनि कोभिडले तपाइंका बिभिन्न अंगमा असर गरेको हुनसक्छ । चिकित्सकको सल्लाह अनुसार यसको पनि उपचार गरेर स्वास्थ्यलाभ गर्नुपर्ने हुन्छ ।
( सरकारले जारी गरेका सुचना, सतर्कता तथा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनाबाट हामी संक्रमणबाट बच्नेछौँ। कृपया पटक्कै लापरबाही नगर्नुहोला । हामीले आफु, परिवार तथा समाजलाई संक्रमण हुन् नदिनको लागि सतर्क बनौं । सतर्क भएमा हामी अस्पताल जानु पर्दैन । )
बैशाख १६, २०७८ बिहिवार १२:०१:२१ बजे : प्रकाशित
निषेधाज्ञाबीच पनि अहिले कोरोना संक्रमण बढ्दै गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कोरोना संक्रमणबाट बच्न र संक्रमित भएमा के गर्ने बारे डा. रवीन्द्र पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिइरहेका छन् । यसपटक डा पाण्डेले कोरोना फैलिरहेको समयमा कस्तो अवस्थामा घरमा बस्ने र कस्तो अवस्थामा अस्पताल जाने भन्ने बारे जानकारी दिएका छन् ।
- भारतमा अक्सिजनको हाहाकार, अस्पतालको चाँप, मृत्युदर तथा घाटका दृश्य देखेर हामीहरुलाई तनाब भएको छ । महामारीको समयमा यस्ता समाचार नहेर्नु उपयुक्त हुन्छ । हाल नेपालमा अक्सिजनको कमी भइसकेको छैन । सबै संक्रमितलाई अक्सिजन चाहिने पनि हैन । आइसीयु तथा भेन्टिलेटर खाली नभएका समाचारले पनि असुरक्षा महशुष गराएका छन् | सरकारले अक्सिजन बेड, आइसीयु तथा कोभिड अस्पताल थपिरहेको छ । विपत्तिको समयमा डराउने / आत्तिने हैन, कुशलतापूर्वक अघिं बढ्नुपर्दछ । अहिले परिस्थिति २० बिग्रेको छ भने हाम्रो मनस्थिति ८० बिग्रेको छ । संचारमाध्यमले पनि मनोबल बढाउने समाचार दिनु उपयुक्त हुन्छ । नकारात्मक समाचारको महामारी झनै घातक हुन्छ ।
- ज्वरो आउने,खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, स्वाद र गन्ध परिवर्तन हुने, पखाला लाग्ने, एकदम थकान हुने, निद्रा लागिरहने, खाना नरुच्ने आदि समस्या भएमा वा घरमा कुनै व्यक्तिलाई कोभिड भएमा वा कुनै कोभिड भएको व्यक्तिसंग भेटघाट गरेको भएमा तथा कतै यात्रा गरेको भएमा तुरुन्त पिसिआर टेस्ट गर्नुहोला ।
- पिसिआर पोजिटिभ हुँदैमा आत्तिनु पर्दैन। तापक्रम ९९.५ भन्दा माथि भएमा पारासिटामोल खान सकिन्छ । खोकी लागेमा एलर्जीको औषधि खान सकिन्छ । पखाला लागेमा प्रोबायोटिक खान सकिन्छ । जीवनजल पर्याप्त खानुपर्दछ ।
- परिवारमा एकजना संक्रमित भएमा सबैलाई संक्रमण सरेको अवस्था छ । सबै संक्रमित भएपनि आत्तिनु पर्दैन । लक्षण अनुसारका सामान्य औषधिले अधिकांश संक्रमितलाई निको हुन्छ। कोभिडले १० दिन केहि न केहि गाह्रो हुनसक्छ । यसको लागि मानसिक तयारी र संयम आवश्यक हुन्छ ।
- अक्सिजनको स्तर ९४ भन्दा माथि छ भने वा सास फेर्न गाह्रो भएको छैन भने कुनै चिकित्सकको सल्लाह अनुसार घरमै उपचार गर्न सकिन्छ | अस्पताल जानु पर्दैन ।
- अक्सिजन ९० भन्दा माथि छ भने घोप्टो परेर सुत्ने तथा कोभिड अस्पतालको फिभर क्लिनिकमा गएर छातीको एक्स रे गर्नुपर्दछ। त्यहाँ अक्सिजन, एक्सरे तथा जांचबाट चिकित्सकले औषधि लेख्नुहुन्छ। त्यहि औषधि र सल्लाह अनुसार घरमै बसेर स्वास्थ्य लाभ गर्न सकिन्छ।
- यदि अक्सिजनको स्तर ९० बाट तल झर्यो भने, सास फेर्न गाह्रो भयो, शरीर सिथिल भयो तथा खान नसक्ने अवस्था आयो भने तुरुन्तै कोभिड अस्पतालमा जानुपर्दछ। भरे वा भोलि जान्छु भनेर पर्खिनु हुँदैन।
- एक्सरे, सिटि स्क्यान आदिबाट तपाईलाई गम्भीर असर देखिएमा अस्पताल भर्ना हुनुपर्दछ। अस्पताल भर्ना भएपछि आत्तिनु पर्दैन। तपाइंको अवस्था अनुसारको उपचार हुन्छ।
- अक्सिजन सिलिन्डर किनेर घरमा अक्सिजन लगाएर बस्नु घातक हुन्छ।अक्सिजनको स्तर घट्ने निमोनिया लगायत छातीको खराबीले हो । त्यसको उपचार र अक्सिजन संगसंगै चिकित्सकको निगरानीमा गर्नुपर्दछ।
- संक्रमित हुँदैमा आइसीयु र भेन्टिलेटरको चिन्ता गर्नुपर्दैन । आइसीयु र भेन्टिलेटर प्याक हुने, खाली हुने क्रम चलिरहन्छ।
- सोर्सफोर्स लगाएर आइसीयु र भेन्टिलेटर पाउन गाह्रो छ । खाली नभएसम्म धैर्यता गर्नुपर्दछ। आइसीयु वा भेन्टिलेटरबाट कुनै गम्भीर बिरामीलाई निकालेर अर्को व्यक्तिलाई राख्न मिल्दैन |
- केन्द्रका अस्पतालमा धेरै चाँप हुने भएकोले सहरबाट अलिकति बाहिरका मेडिकल कलेज वा अस्पतालमा जानु राम्रो हुन्छ। त्यहाँ बिरामीको चाँप कम हुन्छ।
- काठमाडौ बाहिरका अस्पतालमा पनि उपचार राम्रो छ। तसर्थ आफ्नो ठाउँको अस्पताल छोडेर काठमाडौ आउनु जरुरी हुँदैन। उपचारको गाइडलाइन उही नै हो।
- आफुले उपचार गराएको अस्पतालमा आइसीयु वा भेन्टिलेटर छैन भने उक्त अस्पताललाई खाली भएको ठाउँ खोजेर पठाउन अनुरोध गर्नुपर्दछ। हामी आफैले खाली आइसीयु पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ। आइसीयु नपाएपनि चिकित्सक तथा नर्सको राम्रो केयर भयो भने अक्सिजन बेडमा पनि आइसीयु सरहको उपचार हुन्छ।
- अहिले पनि ८५ % संक्रमितलाई घरमै बसेर निको भएको छ। १५ % लाई अस्पतालको सुबिधा आबश्यक देखिएको छ। ५ % लाई आइसीयुको आवश्यकता परेको छ। मृत्युदर १ % मात्र छ।
- समाचार हेरेर / सुनेर आत्तिनु हुँदैन। मनोबल उच्च राख्नुपर्दछ। कोरोना लाग्दैमा मृत्यु हुदैन।
- पोषिलो खाना, हल्का व्यायाम, सकारात्मक सोंच, स्वस्थ जीवनशैली तथा योजनापूर्बक कदम चाल्ने हो भने अस्पताल जानुपर्दैन।
- सबैलाई थाहा नै छ, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने हो भने कोरोना संक्रमण सर्दैन ।
बैशाख २१, २०७८ मंगलवार १२:०४:३४ बजे : प्रकाशित
ओलिटिक्स ताली बजाउनुपर्ने खालको पोलिटिक्स होइन
नारायण गाउँले । अपराधीहरूलाई पुरस्कृत गर्दै मुद्दा फिर्ता लिने, अल्पमतको व्यक्तिलाई कोठामैं गएर बहुमतको मुख्यमन्त्री भन्दै शपथ खुवाउने, भ्रष्टाचारले मुलुक थला परेको बेला गोकुल बाँस्कोटाहरूलाई छानबिन गर्नुको साटो निर्लज्ज रूपमा छानबिन गर्ने समितिमा लैजाने, झन्डै दुई तिहाइ बामबहुमत त टुक्रा-टुक्रा त भयो नै, देशलाई एकढिक्का बनाएर लैजानुपर्ने समयमा अन्य दल र नागरिक समाजमा समेत विग्रह र विभाजन ल्याउन षड्यन्त्र गर्ने, सिङ्गो विश्वले सामाजिक दूरी कायम गर्न जोड़ दिइरहेका बेला आफ्नै पार्टीका विरुद्ध आमसभा र राज्यकोष खर्च गर्दै भीड़ बटुलेर सङ्क्रमण फैल्याउने, एमसिसीबाहेक अर्को विधेयक संसदमा नल्याउने र संसदलाई पङ्गू बनाई अध्यादेशबाटै सरकार चलाउने र यो वैश्विक महामारीका बेला सत्ता टिकाउन महन्थ ठाकुरदेखि देउबाको दैलोसम्म धाउने दृश्यहरू कत्ति पनि प्रिय छैनन् ।
यतिबेला कम्तिमा एमालेलाई सिङ्गो राख्न र ओलीकै कुर्सी बचाउन गर्नुपर्ने धेरै ठूलो कुरो पनि रहेनछ । एमालेलाई विघटन गर्दै नेकपा बनाएका ओलीले महाधिवेशनबाट एमाले जस्तो बनेको थियो त्यस्तै स्वीकार गर्ने हो भने यो एकढिक्का हुने रहेछ । देश पनि राजनैतिक दुर्गन्ध र षड्यन्त्रबाट अलिकति उठेर मानवीय विपत्तितिर लाग्न सक्ने रहेछ । यतिबेला नेपाल पक्षले न ओलीको राजीनामा मागेको छ, न महन्थ ठाकुरले जस्तो ठूलो भाग मागेको छ ।
महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेताहरूको जिम्मेबारी यथावत् होस् भन्ने जस्तो सामान्य मागमा पनि वैयक्तिक ईगो र रिसीबी साँधेर विभाजनलाई मलजल गर्ने काम किन गर्नुपरेको होला ? एउटा पक्षका सबैको जिम्मेबारी आफूखुशी खोस्ने र आफ्नालाई बाँड्ने प्रवृत्तिले पनि पार्टी चल्छ र ? आफ्ना चाटुकारबाहेक अन्यलाई कुनै अवसर र जिम्मेबारी नदिने भन्ने पनि हुन्छ र ?
बैशाख २२, २०७८ बुधवार २१:१२:३७ बजे : प्रकाशित